VIRAT KOHLI အမြင့်၊ အသက်၊ ဇနီး၊ ရည်းစား၊ မိသားစု၊ - ခရစ်ကက်
Virat Kohli အမြင့်၊ အသက်၊ ဇနီး၊ ရည်းစား၊ မိသားစု၊
နာမည်ပြောင် (များ) ကျောင်း, ပြေးစက်
အလုပ်အကိုင် အိန္ဒိယခရစ်ကက် (Batsman)
အမြင့် (ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်) စင်တီမီတာမှာ 175 စင်တီမီတာ
မီတာဖြင့် ၁.၇၅ မီတာ
လက်မအတွင်း ၅ '၉ '
နိုင်ငံတကာပွဲ ဦး ထွက် ODI- ၂၀၀၈ သြဂုတ်လ ၁၈ ရက်၊ Dambulla ၌သီရိလင်္ကာကိုဆန့်ကျင်ခဲ့သည်
စမ်းသပ်မှု Kingston မှာအနောက်အင်ဒီးဆန့်ကျင်ဇွန်လ 20, 2011
T20 - ဇွန် ၁၂ ရက်၊ ဇင်ဘာဘွေကို Harare တွင်ဆန့်ကျင်ခဲ့သည်
ဂျာစီနံပါတ် နံပါတ် ၁၈ (အိန္ဒိယ)
နံပါတ် ၁၈ (IPL)
ပြည်တွင်း / ပြည်နယ်အဖွဲ့ ဒေလီ၊ အိန္ဒိယနီ၊ တော်ဝင်စိန်ခေါ်သူများဘန်ဂလို
အကြိုက်ဆုံးရိုက်ချက် Drive, Flick Shot ကိုဖုံးပါ
မှတ်တမ်းများ (အဓိကမှတ်တမ်းများ) •ကမ္ဘာ့ဖလားပွဲ ဦး ထွက်တွင်ရာစုနှစ်တစ်စုရမှတ်ပထမဆုံးအိန္ဒိယ (၂၀၁၁) ။
•အသက် ၂၂ နှစ်တွင် ODI ရာပေါင်းများစွာပြုလုပ်ရန်တတိယအိန္ဒိယနိုင်ငံ (Sachin Tendulkar & Suresh Raina ) ။
ODI ခရစ်ကက်တွင်ပြေးနှုန်း ၁၀၀၀၊ ၃၀၀၀၊ ၄၀၀၀ နှင့် ၅၀၀၀ ပြေးရန်အလျင်မြန်ဆုံးအိန္ဒိယ။
•အိန္ဒိယမှအမြန်ဆုံးရာစုနှစ် (၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင်အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ Jaipur ၌သြစတြေးလျကိုဆန့်ကျင်သောဘောလုံး ၅၂ ခုရှိသည်)
• 25 ODI တန်ချိန်ရရန်အမြန်ဆုံး။
• ၇၅၀၀ ODI ပြေးရန်ရောက်ရှိရန်အမြန်ဆုံး။
• Don Bradman နှင့် Ricky Ponting တို့ပြီးလျှင်ပြက္ခဒိန်နှစ်တွင်သုံးဆရာဂဏန်းရမှတ်တတိယကစားသမား။
• Don Bradman, Graeme Smith ကဲ့သို့သောလူနှစ်ဆယ့်လေးရာ၏မှတ်တမ်းကိုမျှဝေသည်။ Michael Clarke ။
•ပြက္ခဒိန်နှစ်အတွင်း ၉ ခုမြောက်အနိုင်ငွေများကိုပထမဆုံးမှတ်ပုံတင်ရန်အိန္ဒိယအသင်းခေါင်းဆောင်။
•ပထမစီးရီးမှူးသည်ဆက်တိုက်စမ်းသပ်မှုအနိုင်ရ ၅ ခုကိုမှတ်ပုံတင်ရန်။
•ပထမ ဦး ဆုံးအိန္ဒိယသည်ပြက္ခဒိန်တစ်နှစ်အကြာတွင် 1000 ကျော်ပြေးပြေးစုစုပေါင်းရန် Rahul Dravid 2011 ခုနှစ်တွင် 1145 ပြေးလုပ်သောသူ။
•စမ်းသပ်မှုများတွင် ၂၃၅ ၏အမြင့်ဆုံးရမှတ်သည်စမ်းသပ်မှုရှိအိန္ဒိယကပ္ပတိန်၏အမြင့်ဆုံးရမှတ်ဖြစ်သည်။
•ပင်လယ်ရပ်ခြားစာမေးပွဲတွင်နှစ်ရာစုနှစ်ရမှတ်ပထမ ဦး ဆုံးအိန္ဒိယစာမေးပွဲမှူးမှူး။
•အများစုသည် IPL တွင်ရာသီတစ်ခုတည်းပြေးသည် (၉၇၃ ခုသည် IPL 9-2016 တွင်ပြေးသည်) ။
•တစ်နှစ်အတွင်း IPL တွင်ရာနှင့်ချီသောလူများ (၄) ။
•အမြန်ဆုံး ၁၀,၀၀၀ သို့ ODI ပြေးပြီးအမှတ်အသား ၂၀၅ တွင်အမှတ်အသားသို့ရောက်သည်။
•မည်သည့်အိန္ဒိယကပ္ပတိန်မဆိုအမြင့်ဆုံးပြေးသူဖြစ်သည်။ သူသည်ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှ၌သြစတြေးလျနှင့်ကစားစဉ် ၂၀၂၀ ဇန်နဝါရီ ၁၉ တွင်အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့သည် သူကကပ္ပတိန်အဖြစ်ပြေး ၁၁၂၀၈ ဂိုးကိုသွင်းယူခဲ့သည်။ သူသည်ယခင်သင်္ဘောမှူးထက်သာလွန်ခဲ့သည် မစ္စဒွန်နီ 11207 စုဆောင်းသူသည်ကပ္ပတိန်အဖြစ်ပြေး။ Dhoni သည်ပြေးခုန်ပေါင်း ၁၁,၂၀၈ ဂိုးသွင်းရန်အဝင် ၃၃၀ ကိုယူခဲ့စဉ် Kohli သည် ၁၉၉ ရုံမျှသာကပ္ပတိန်အဖြစ်သူ့ကိုကျော်တက်ခဲ့သည်။ မိုဟာမက် Azharuddin (၈၀၉၅) စာရင်းတွင်တတိယမြောက်ဖြစ်သည် Sourav Ganguly (7643) ။
အလုပ်အကိုင်အလှည့် သူသည်မလေးရှား၌ ၂၀၀၈ ခုနှစ်ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးကမ္ဘာ့ဖလားဘောလုံးပွဲကိုအိန္ဒိယကအနိုင်ရခဲ့သည်။
မွေးနေ့ ၅ နိုဝင်ဘာ ၁၉၈၈
အသက် (၂၀၂၀ အထိ) ၃၂ နှစ်
မွေးရပ်မြေ ဒေလီ၊ အိန္ဒိယ
ဇာတိမြို့ ဒေလီ၊ အိန္ဒိယ
ကျောင်း Vishal Bharti ပြည်သူ့ကျောင်း၊ ဒေလီ
ကယ်တင်ရှင်ခရစ်ယာန်သီလရှင်အထက်တန်းကျောင်း Paschim Vihar, ဒေလီ
ကောလိပ် N / A
ပညာရေးဆိုင်ရာအရည်အချင်း 12 အဆင့်
မိသားစု ဖခင် - Late Prem Kohli (ပြစ်မှုဆိုင်ရာရှေ့နေ)
အမေ - Saroj Kohli (အိမ်ဆောက်)
နှမ - Bhawna Kohli (အသက်ကြီး)
အစ်ကို - Vikas Kohli (အသက်ကြီး)
နည်းပြ / ဆရာ Raj Kumar Sharma က
အစားအစာအလေ့အထ သက်သတ်လွတ် (၂၀၁၉ ခုနှစ်အောက်တိုဘာလတွင်သက်သတ်လွတ်စားခဲ့သည်)  နှစ်များ
လိပ်စာ DLF City အဆင့် ၁၊ Block-C၊ ဂူရဂရမ်
Likes & မကြိုက်ဘူး ကြိုက်တယ် ခရစ်ကတ်ဗွီဒီယိုဟောင်းများကြည့်ခြင်း၊ ကြည့်ရှုခြင်း Roger Federer အားကြည့်ခြင်းအားဖြင့်သူသည်ခရစ်ကတ်အနားတွင်ရှိသောဘောလုံးနှင့်တင်းနစ်ကိုနှစ်သက်သည်။ ကားမောင်းရန်နှစ်သက်သည်၊ ဆူရှီအတွက် (အရသာ) အရသာ၊ သူငယ်ချင်းဟောင်းများနှင့်တွေ့ဆုံခြင်း
မကြိုက်ဘူး - အိမ်၌ guests ည့်သည်များအလွန်များနေပြီးအချိန်ကြာမြင့်စွာပျင်းရိစွာထိုင်နေကြသည်
ဝါသနာ လေ့ကျင့်ခန်း, ခရီးသွားလာ, သီချင်းဆို, ကခုန်
အငြင်းပွားမှုများ • ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင်သြစတြေးလျသို့ပထမဆုံးအကြိမ်သွားရောက်သည့် Kohli သည်ဒုတိယစမ်းသပ်မှုအတွင်းနယ်နိမိတ်မျဉ်းတွင်နယ်နိမိတ်ကိုဖြတ်သန်းစဉ်သူ့ကိုအလွဲသုံးစားပြုပြီးနောက်ဆစ်ဒနီလူအုပ်အားလက်ခလယ်အားပြခဲ့သည်။
• ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် Royal Challengers Bangalore နှင့် IPL6ရှိ Kolkata Knightriders နှင့် Kohli၊ Gautam gambhir တစ် ဦး ရုပ်ဆိုးတံထွေးရှိခဲ့ပါတယ်။ ထွက်သွားပြီးနောက်ပြန်လမ်းလျှောက်မည့်အစား Kohli က Gambhir အားဒေါသထွက်စေသည့်မှတ်ချက်အချို့ပေးခဲ့သည်။ Rajat Bhatia ကြားဝင်ခဲ့သည်
•သြစတြေးလျရှိ ၂၀၁၅ ကမ္ဘာ့ဖလားမတိုင်မီ၊ BCCI သည်ကမ္ဘာ့ဖလားဘောလုံးပွဲအတွင်းအိန္ဒိယကစားသမားများအားသူတို့၏ဇနီးများသို့မဟုတ်မိန်းကလေးများနှင့်အတူနေရန်တားမြစ်ခဲ့သည်။ သို့သော်သတင်းများအရ Kohli သည်သူ၏ရည်းစား Anushka Sharma တည်းခိုသည့်ဟိုတယ်တွင်တည်းနေသည်။
Kohli သည်သတင်းစာဆရာတစ် ဦး သည်မင်းသမီး Anushka Sharma နှင့်ပတ်သက်သည့်ဆောင်းပါးကို National Daily တွင်ရေးသားခဲ့သည်ဟုထင်မြင်ခဲ့သဖြင့် 2016 ခုနှစ်တွင် K20 သည် T20 World Cup တွင်လေ့ကျင့်မှုတစ်ခုပြုလုပ်ပြီးနောက်သတင်းစာဆရာတစ် ဦး အားနှိပ်စက်ခဲ့သည်။ သို့သော်နောက်ပိုင်းတွင်ကောလီသည်မှားယွင်းသောစာနယ်ဇင်းသမားဖြစ်ကြောင်းသိရှိလာပြီးနောက်ချက်ချင်းပင်တောင်းပန်ခဲ့သည်။
•သော်လည်း Anil Kumble ၂၀၁၆ ဇွန်လတွင်အိန္ဒိယပုရစ်အသင်းနည်းပြအဖြစ်အမည်ပေးခြင်းခံရသည်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်အစောပိုင်းတွင် Anil နှင့် Virat Kohli အကြားကွဲပြားခြားနားမှုများကိုအရိပ်အမြွက်ပြောကြားခဲ့သည်။ သို့သော်ချန်ပီယံလိဂ်ချန်ပီယံ ၂၀၁၇ မတိုင်မီ BCCI သည်အမျိုးသားခရစ်ကက်အသင်းနည်းပြ၏ကြော်ငြာအတွက်ကြော်ငြာကိုထုတ်ဝေသည့်အချိန်တွင်၊ Anil သည်အလွန်စိတ်ထိခိုက်။ သူ၏နည်းပြအလုပ်ကိုရပ်ဆိုင်းရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၇ ဇွန် ၂၁ တွင် Anil သည်ရာထူးမှနုတ်ထွက်ခဲ့သည် အိန္ဒိယခရစ်ကက်အသင်းနည်းပြ၏။
ခရစ်ကက် (များ) Batsman: Sachin Tendulkar , ခရစ် Gayle , Shane Watson , David warner , ဂျိုး Root , Herschelle Gibbs
ခရစ်ကက်မြေပြင် Adelaide ဘဲဥပုံ, Adelaide, သြစတြေးလျ
ခရစ်ကက်Commentီကာဆရာ Harsha Bhogle
အစားအစာ ဆော်လမွန်, ဆူရှီ, သိုးသငယ် Chops
သရုပ်ဆောင် (များ) Aamir Khan , ဂျော်နီ depp , Robert Downey Jr။
မင်းသမီး Penelope Cruz, Aishwarya rai , Kareena Kapoor , ကက်ထရီနာ Kaif
ရုပ်ရှင်များ) ဘောလီဝုဒ်: နယ်စပ်, Jo Jeeta Wohi Sikandar, Ishq,3Idiots
ဟောလိဝုဒ် ကျောက် 4, သံက Man, Southpaw
တီဗီပြရန် အမေရိကန် အမိုးအကာ၊ မူးယစ်ဆေးဝါး၊
ဂီတသမား Asrar, Eminem
ကား Aston Martin
စာအုပ် Paramahansa Yogananda မှ Yogi ၏ကိုယ်တိုင်ရေးအတ္ထုပ္ပတ္တိ
ဘတ်စကက်ဘောကစားသမား Kobe Bryant [နှစ်ခု] ဟိန္ဒူ
ရေးရာ / မိန်းကလေး စာရာ - ဂျိန်း Dias (မင်းသမီး၊ ကောလာဟလ)
Sanjana (မော်ဒယ်၊ မင်းသမီး၊ ကောလာဟလ)
Tamannaah Bhatia (မင်းသမီး၊ ကောလာဟလ)
Izabelle Leite (ဘရာဇီးလ်ပုံစံ၊ ကောလာဟလ)
Mansha bahl (မော်ဒယ်၊ မင်းသမီး)
ဇနီး / အိမ်ထောင်ဖက် မသီတာရှားမာ
လက်ထပ်ထိမ်းမြားရက် ဒီဇင်ဘာ ၁၁ ရက်
ကလေးများ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၁ ရက်နေ့တွင်ဗိုင်းရတ်နှင့်သူ၏ဇနီးမသီတာတို့သည်ဗင်မီကာကလေးငယ်ဖြင့်ကောင်းချီးပေးခဲ့သည်။
ကားများစုဆောင်းခြင်း Audi Q7, Audi S6, Audi R8 V10, Audi R8 LMX, Audi A8L W12 Quattro, Toyota Fortuner
လစာ (၂၀၁၈ တွင်ကဲ့သို့) မိတ္တူကူးခ ရူပီး7ကုcroေ
စစ်ဆေးခ ရူပီး ၁၅ သိန်း
ODI ကြေး ရူပီး ၆ သိန်း
T20 ကြေး: ရူပီး ၃ သိန်း
IPL 11: ရူပီး ၁၇ ကုcroေ
ဝင်ငွေ (၂၀၁၈ တွင်ကဲ့သို့) ရူပီး 228,09 ကုreေ / တနှစ်  Forbes မဂ္ဂဇင်း
အသားတင်ပိုင်ဆိုင်မှု (ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်) ရူပီး 400 Crore
Virat Kohli ဆေးလိပ်သောက်ပါသလား။ မသိပါ
Virat Kohli သည်အရက်ကိုသောက်ပါသလား
၃ နှစ်အရွယ်ကတည်းက Virat သည်ခရစ်ကက်ကိုနှစ်သက်ခဲ့သည်။
Virat Kohli ရဲ့ကလေးဘဝဓာတ်ပုံ
ကပ္ပတိန် amarinder Singh ကမိသားစုဓာတ်ပုံများကို
သူက9½နှစ်အရွယ်မှာ, သူ့ဖခင် Raj Kumar Sharma ကရဲ့အနောက်ဒေလီခရစ်ကက်အကယ်ဒမီသူ့ကိုခေါ်သွားတယ်။
သူ့ရဲ့နည်းပြ Raj Kumar Sharma နဲ့ Virat Kohli
၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင်သူ၏နည်းပြ Raj Kumar Sharma ကဖိတ်ကြားခဲ့သည် Ashish nehra သူသည် ၂၀၀၂-၂၀၀၃ Polly Umrigar Trophy ၌ဒေလီအတွက်အမြင့်ဆုံးပြေးသူအဖြစ်လူငယ် Kohli ကိုချီးမြှင့်သည့်သူ၏အကယ်ဒမီသို့၊ ပျမ်းမျှအားဖြင့်ပျမ်းမျှ ၃၄.၄၀ ပြေးနှုန်းမှာ ၁၇၂ ပြေးနှုန်းဖြစ်သည်။
ထို့နောက် Ashish Nehra နှင့်အတူ Virat Kohli
သူ၏အမည်ပြောင် 'Chikoo' ကိုသူ၏ဒေလီပြည်နယ်နည်းပြ Ajit Chaudhary ကသူ့ကလေးဘဝကတည်းကပေးခဲ့သည်။
မိမိအကြိုက်ဆုံးဘာသာရပ် '' သမိုင်း '', သူသည်မုန်းလေ့ရှိတယ် '' သင်္ချာ။ '
2006 ခုနှစ်တွင်သူ၏ဖခင် ဦး နှောက်လေဖြတ်ခြင်းဖြင့်ကွယ်လွန်သွားပေမယ့်သူသည်မိမိအဘသေဆုံးပြီးနောက်တစ်နေ့တွင်သူသည်ပြေး 90 သွင်းယူရှိရာ Karnataka, ဆန့်ကျင်ဒေလီအတွက်ပွဲစဉ် - ချွေတာခေါက်ခဲ့သည်။
သူ၌အယူသီးမှုများစွာရှိသည်။ သူကအနက်ရောင်လက်ကောက်ဝတ်ကိုဝတ်ဆင်နှင့်သူ၏ပွဲမတိုင်မီသူ၏ 'Kada' 'ဝတ်ဆင်ရန်ဘယ်တော့မှမ။
သူကအရမ်းရန်လိုတတ်သူ၊ စိတ်ခံစားမှုရှိတဲ့သူတစ်ယောက်ပါ၊ သူစိတ်ဆိုးလာတဲ့အခါအော်ငိုတယ်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံသည် ၂၀၁၂ ခုနှစ် T20 ကမ္ဘာ့ဖလားတွင်ဆီမီးဖိုင်နယ်အတွက်အရည်အချင်းမပြည့်မီသောအချိန်တွင်သူသည်ကွင်းထဲတွင်ငိုနေသည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင်သူသည် ICC ODI Player of Year ဆုကိုဆွတ်ခူးရရှိခဲ့သည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင်သူသည် ၀ တ်စားဆင်ယင်ခံရသည့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအမျိုးသား ၁၀ ယောက်တွင်တစ်ယောက်အပါအ ၀ င်ဖြစ်သည်။
သူသည်အိန္ဒိယအစိုးရမှ Arjuna Award (၂၀၁၃) နှင့် Padma Shri ဆု (၂၀၁၇) တို့ကိုရရှိခဲ့သည်။
Virat Kohli - Padma Shri ဆု
ထိုနှစ်တွင်ပင်သူသည်နယ်ခြားလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ (BSF) ၏ပထမဆုံးတံဆိပ်သံအမတ်အဖြစ်ခန့်အပ်ခြင်းခံရသည်။
BSF သံအမတ်အဖြစ် Virat Kohli
shahrukh Khan ကအိမ်မှာ mannat pics
သူသည်ဆွစ်တင်းနစ်တင်းနစ်ကစားသမားတစ် ဦး ဖြစ်သည် ရော်ဂျာဖက်ဒရယ် ။ သူသည်ယူအေအီးရှိတော်ဝင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပရီးမီးယားလိဂ်တင်းနစ်အဖွဲ့ချုပ်၏တွဲဖက်ပိုင်ရှင်လည်းဖြစ်သည်။
Roger Federer နှင့်အတူ Virat Kohli
သေမင်း၏ bachchan နေ့စွဲ amitabh
သူမတက်တူးထိုးတာကိုနှစ်သက်တယ်။ သူ့ရဲ့တက်တူးထိုးထားတဲ့အရေအတွက်ကဆက်ပြီးတိုးလာတယ်။ သူ၏ဘယ်ဘက်ပခုံးပေါ်တွင်ပထမ ဦး ဆုံးမှာဘုရားသခင့်မျက်လုံးတော်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်မြင်။ မသိ၊ နားမလည်နိုင်သောအရာများကိုမြင်။ နားလည်နိုင်သောတန်ခိုး၏သင်္ကေတဖြစ်သော 'ဘုရားသခင်၏မျက်စိတော်' ဖြစ်သည်။ သူ၏ဘယ်ဘက်ပခုံးပေါ်တွင်ဒုတိယအနေဖြင့် 'ဂျပန်ဆာမူရိုင်းစစ်သည်' သည်သခင်၏သစ္စာရှိမှု၊ မိမိကိုယ်ကိုစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်ရိုသေလေးစားမှုနှင့်ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ် အခြေခံ၍ ဘဝနေထိုင်ခြင်း၏အမှတ်အသားဖြစ်သည်။ တတိယသူ၏ဘယ်ဘက်လက်မောင်းတွင်ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်အာဏာရှိသောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည့်ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းဖြစ်သည်။ သူ၏ဘယ်ဘက်လက်မောင်းတွင်စတုတ္ထနေရာမှာ 'Lord Shiva Mount Kailash နှင့် Mansarovar အိုင်တို့ဖြင့်တရားအားထုတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ' 'ညာဘက် bicep တွင်ပဉ္စမမှာ Zodiac သင်္ကေတဖြစ်သော' Scorpion 'ဖြစ်သည်။
Virat Kohli ရဲ့တက်တူး
သူကဒေလီမှာရှိတဲ့ Nueva စားသောက်ဆိုင်ကိုပိုင်ဆိုင်တယ်။
Virat Kohli ရဲ့စားသောက်ဆိုင်နယူး
သူသည်လျောက်ပတ်သောအဆိုတော်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် 'Jo Wada Kiya Hai Nibhana Padhega' ဆိုသောသူ၏ဗွီဒီယိုသည်ဗိုင်းရပ်စ်ပျံ့နှံ့သွားသည်။
သူသည်စစ်မှန်သောစိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားသည့်အားကစားသမားတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးသူသည်မိမိ၏ cricketing စွမ်းရည်ကိုအာရုံစိုက်ရုံသာမကလူအများစု၏ကြည်ညိုလေးစားမှုကိုခံနိုင်သောကြံ့ခိုင်မှုကိုပါအာရုံစိုက်သည်။ Virat Kohli ၏ကြံ့ခိုင်မှုဆိုင်ရာလျှို့ဝှက်ချက်များကိုကြည့်ရန်ဤနေရာကိုနှိပ်ပါ!
၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာ ၁၁ ရက်နေ့တွင်ဗစ်ရတ်နှင့်မသီတာသည်အီတလီနိုင်ငံ၊ တာစန်နီတွင်သီးသန့်အခမ်းအနားတစ်ခုတွင်လက်ထပ်ခဲ့သည်။ အသေးစိတ် ဒီမှာ !
၂၀၁၈ ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ ၂၅ ရက်နေ့တွင်အိန္ဒိယအစိုးရသည် Virat Kohli အားဂုဏ်ပြုသော Rajiv Gandhi Khel Ratna ဆုနှင့်ချီးမြှင့်ခဲ့သည်။
Virat Kohli - Rajiv Gandhi Khel Ratna ဆု
၂၀၁၁ ခုနှစ်အောက်တိုဘာလတွင်သူသည်သက်သတ်လွတ်စားသူဖြစ်လာပြီးသက်သတ်လွတ်စားပြီးနောက်သူသည် ပိုမို၍ ဂုဏ်ယူကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ တွစ်တာကိုယူပြီး၊
၂၀၁၄ ခုနှစ်အင်္ဂလန်နိုင်ငံအိန္ဒိယသို့အလည်အပတ်ခရီးစဉ် Kohli သည်စမ်းသပ်မှုငါးခုတွင်စမ်းသပ်မှုငါးခုတွင် ၁၊ ၈၊ ၂၅၊ ၀၊ ၃၉၊ ၂၈၊ ၀.၇၊ ၆ နှင့် ၂၀ ကိုအဝင်ဆယ်နေရာတွင်ပျမ်းမျှ ၁၃.၅ ပြေးနှုန်းဖြင့်သွင်းယူနိုင်ခဲ့သည်။ သူစိတ်ကျရောဂါသို့သွားလေ၏; Kohli သည်သူ၏အင်္ဂလန်ကစားသမားဟောင်း Mark Nicholas နှင့်စကားပြောနေစဉ်တွင် 'Not Just Cricket' ၏ Podcast တခုကိုပြောကြားခဲ့သည်။
သင်ရုံကကျော်ရဖို့ဘယ်လိုနားမလည်ကြဘူး။ အရာအားလုံးကိုမှောက်လှန်ဖို့ဘာမှမလုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့အချိန်ပဲ။ ငါဟာကမ္ဘာပေါ်မှာအထီးကျန်ဆုံးကောင်လိုခံစားခဲ့ရတယ်။
↑၃ Forbes မဂ္ဂဇင်း
mahendra Singh က dhoni
စူပါအဆိုတော် malavika လက်ထပ်ထိမ်းမြားဓာတ်ပုံများ
tarak ထာ ka ooltah chashmah သရုပ်ဆောင်များကိုလစာ
Akshay Kumar ရုပ်ရှင်စာရင်းဝီကီ